Soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha PETG - Shiinaha PETG Factory
0.5 oz (15ml) cad PETG dhalada dhibcaha leh oo leh 9-400 qoorta ayaa dhammaatay
Weelasha dhibcaha ah ee 0.5oz/15ml waxaa laga sameeyaa maaddada PETG Dhalada dhibicdu waa oval iyo flat. Dhalooyinka wax lagu tuujiyo ee caaga ah waxay tilmaamayaan in la baari karo ama lagu daaweyn karo koollo. Calaamadda ay samaysay shirkaddaadu waxaa lagu samayn karaa dhalada dhibicda qaaliga ah, si kor loogu qaado saamaynta sumcadda shirkaddaada. Qaabka guud ee dhalooyinka dhibcaha madhan waa mid is haysta, oo ku siinaya waayo -aragnimo ka wanaagsan iyo saamaynta shaashadda. wuxuu qaataa daboolka dhejiska iyo baakada wax lagu xiro si loo hubiyo 100% xirashada alaabta.Waxa loo isticmaali karaa baakadaha indhaha, baakadaha saliida ee muhiimka ah, dhalooyinka baakadaha sigaarka elektarooniga ah. Waxa ku jira daboolka dhalada dhibicda.
0.5 oz (15ml) oo cad PETG dhalada dhibcaha octagonal oo leh 10 qoorta dhammaatay
Weelasha dhibcaha ah ee 0.5oz/15ml waxaa laga sameeyaa maaddada PETG Dhalooyinka caagga ah ee dhibcaha indhaha waa octagonal iyo flat. Dhalada dhibbanaha ayaa tilmaameysa in la baari karo ama lagu daaweyn karo koollo. Calaamadda ay samaysay shirkaddaadu waxaa lagu samayn karaa dhalada dhibicda caagga ah si kor loogu qaado saamaynta sumcadda shirkaddaada. Qaabka guud ee dhalada caaggu waa mid kooban, oo ku siinaysa waayo -aragnimo ka wanaagsan iyo saamaynta shaashadda. Daboolka wuxuu qaataa daboolka dunta iyo furka shaabadaysan si loo hubiyo in badeecaddu tahay 100% shaabadeyn.Waxa loo isticmaali karaa baakadaha indhaha, baakadaha saliidda ee muhiimka ah, dhalooyinka baakadaha sigaarka elektarooniga ah.